Benito Pérez Galdós, onye nnọchi anya kachasị elu nke Spanish Realism | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Benito Pérez Galdós, onye nnọchi anya kachasị elu nke Spanish Realism
Carmen Guillen | | Ndị edemede, Genres, Akwụkwọ, Novela
Benito Pérez Galdós, yana Leopoldo Alas «Clarín», bụ ndị nnọchiteanya kachasị elu nke Ọdịdị Spanish. Otu ọ dị, taa anyị leghaara nke abụọ anya, nke anyị ga-atụle n'isiokwu ọzọ n'oge na-adịghị anya, anyị lekwasịrị anya na ọlụ nke izizi, Galdós.
1 Benito Pérez Galdós na akwụkwọ akụkọ ya
2 Echiche na isiokwu nke ọrụ ya
3 Dódị Galdós dị mma
Benito Pérez Galdós na akwụkwọ akụkọ ya
Na oru Galdós, ihe omumu banyere ihe omuma ya putara ihe bu otutu ndi iche:
na Mba ngosipụta ha mejuputara akwukwo akwukwo 46 nke na akuko akuko banyere Spain site na agha nke Trafalgar rue nloghachi nke ndi eze. Utu aha ya ama ama n’agba ndi a bu "Trafalgar", "Bailen" y "Saragossa".
Na akwụkwọ akụkọ mbụ nke Galdós, nke a na-egosipụta n'ụzọ doro anya ọnọdụ ya na-aga n'ihu. Ọrụ dịka "Nwanyị zuru oke" (1876), "Ebube" (1877) na "Ezinụlọ Leon Roch" (1878). Imirikiti akwụkwọ ndị a gbasara «Tesis Akwụkwọ akụkọ»N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, eziokwu ndị e gosipụtara bụ maka ọrụ nke otu echiche na ndị odide egosibeghị ụdị mgbagwoju anya nke usoro ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, Galdós, zuru ezu ntozu akwukwo, na-ede akwụkwọ akụkọ Spanish n'oge a. N'ime ha, họrọ maka a ebumnobi doro anya karị ma jụ usoro mmụta echiche ya mere doro anya. N'ime akwụkwọ akụkọ ndị a, a na-ahụkwa mmetụta ndị sitere n'okike, mana ọ gaghị apụta n'ụkpụrụ a n'agbanyeghị agbanyeghị usoro eji eme ihe. Madrid na-abụkarị obodo nke onye edemede ahụ họọrọ maka akwụkwọ akụkọ ndị a: «Tormento» (1884), "La de Bringas" (1884), "Meow" (1888) na «Fortunata na Jacinta» (1887).
Site na 1889, oge mmeputa ikpeazụ nke ọdee akwụkwọ. Ihe ejiri mara nke a bụ mmụọ nke ọrụ ya, ebe Galdós lekwasịrị anya mmadụ na ihe ịdị adị ya. N'oge a, ọ na-etinye usoro ịkọ akụkọ ọhụụ wee tinye ihe dị ka nrọ, ihe atụ ma ọ bụ dị egwu. Akwụkwọ akụkọ dịka "Eziokwu" (1889), «Angel Guerra» (1891), "Tristana" (1892), "Nazarín" (1895) ma obu "Ebere" (1897).
Echiche na isiokwu nke ọrụ ya
E nwere ọtụtụ echiche na isiokwu enwere ike ịtụle kpam kpam "Galdosian":
La ịkatọ mmadụ. Galdós nwere nkwanye ugwu dị ukwuu maka klaasị ndị na-enweghị ikike, dị ka ndị arịrịọ, ndị ọrịa ma ọ bụ ndị ngwọrọ, n’otu oge ahụ na ọ na-egosi mkpochapụ n’ebe ndị na-agbabeghị n’oge ugbu a nọ, dị ka ndị ụkọchukwu, ndị a ma ama ma ọ bụ ndị nkịtị. Klaasị na-akatọkarị ọrụ ya bụ bourgeoisie.
La política, nke a na-ekpe ikpe site na akụkọ ihe mere eme nke oge a. Enwere ọrụ ndị na-enyocha nyocha nke ugbu a na nke gara aga nke onye edemede ha. N'ime ndị a, mmụọ nnwere onwe, nke onye kwuo uche ya na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke duziri ngbanwe nke echiche ya. Galdós na-aga n’ihu n’enweghị olileanya ọhụụ nke akụkọ ihe mere eme, ọkachasị n’oge agadi ya, nke na-eduga ya ịtụle ọdachi ọjọọ nke mba ahụ dịka ihe gbanyere mkpọrọgwụ na Spanish.
La okpukpe. O megidere ikike ndị ụkọchukwu, n'agbanyeghị na ọ na-ekpughe ọmịiko o nwere n'ebe onye ụkọchukwu na-ezisa ozi ọma nọ.
Dódị Galdós dị mma
Galdós na-emepụta n'ime ọrụ ya ụwa akụkọ ifo na-ekwesị ntụkwasị obi nye eziokwu. N'ezie, otu oge a bụ isi iyi sitere n'ike mmụọ nsọ ya. N'ihi ya, n'okwu ọnụ ụzọ ya na Royal Spanish Academy, nke a na-akpọ budata aha ya "Ugbu a dị ka akwụkwọ akụkọ", ọ na-ekwu, sị:
«Ihe oyiyi nke ndụ bụ akwụkwọ akụkọ, na nka nke idepụta ya dị na ịmịpụta mkpụrụedemede mmadụ, agụụ mmekọahụ, adịghị ike, nke ukwu na obere, mkpụrụ obi na physiognomies, ihe niile nke mmụọ na nke anụ ahụ nke mejupụtara anyị na anyị gburugburu, na asụsụ, nke bu akara ngosi nke agburu, na ebe obibi, nke bu ihe iriba-ama nke ezi na ulo, na uwe, nke n’eme ihe banyere njiri mara nke akpukpo azu: ihe ndia nile n’echefughi na agha aghaghi iguzosi ike n’ezi ihe zuru oke n’etiti izi ezi na ima nma nke mmeputakwa.
Mkparịta ụka na ọchị bụkwa akụkụ dị mkpa nke ụdị Galdós.
Ọ bụrụ na-amasị gị akwụkwọ akụkọ dị adị n'ezie, echi, anyị ga-aga n'ihu na-enyocha ya, na-enyochakwa kpakpando ọzọ na-ede akwụkwọ nke mmegharị a: Leopoldo Ewoo «Clarín».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Benito Pérez Galdós, onye nnọchi anya kachasị elu nke Spanish Realism
Isi okwu 5 nke akwụkwọ edemede akwụkwọ kachasị ọhụrụ nke afọ a
"Star Wars Anthology" nke mbipụta ole nke Planeta Cómic dere